३० किलोका माला लगाएका प्रचण्डमाथि बाबुरामको व्यंग, फुलको बजार विस्तार गरी समृद्धीको आधार निर्माण गर्न खोजिएको हो ? – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, पुष २९, २०७४१०:५१
काठमाडौं, २९ पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले व्यंग्य प्रहार गरेका छन् ।
भट्टराईले शनिवार विहान ट्वीट मार्फत प्रचण्डलाई व्यंग्य गरेका हुन् । प्रचण्डले ३० किलोको माला लगाएको तस्विर समेत शेयर गर्दै पछिल्लो समय आर्थिक समृद्धीनै अबको मुख्य कार्यभार भएको बताउँदै आएका भट्टराईले प्रचण्ड माथि यही विषयमा व्यंग्य गरेका हुन् ।
समृद्धीलाई मुख्य एजेण्डा मान्ने प्रिय कमरेडले ३० किलोको माला ग्रहण गरी फुलको बजार विस्तार गरेर समृद्धी निर्माण गर्न लाग्नुभएको हो ? उनले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘समृद्धीलाई मुख्य एजेण्डा मान्नुहुने मेरा प्रिय कमरेडले ३० किलोको माला ग्रहण गर्नुभएको फूलको बजार विस्तार गरेर देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने नयाँ राजनीतिक अर्थशास्त्रको नियम प्रतिपादन गर्नलाई हो कि कसो हो ? प्रकाश पारिदिनुभए हामी सबै अनुगृहित हुनेथियौं !’
पछिल्लो समय नेताहरुलाई धेरै तौलका माला लगाइदिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । जसलाई धेरैले नकरात्मकरुपले हेर्ने गरेका छन् ।
जाडोमा सुन्तला खानुका फाइदा